Haganai - एक सीजन3हुनेछ? - पालना दृश्य
by Dima 2nd अगस्ट 2016 12th जनवरी 2022
Haganai 2011 मा रिलिज भएको एनिमे हो जुन एक समूह विद्यार्थीहरूको कथालाई पछ्याउँछ जसले हाईस्कूल क्लब बनाउँछ जहाँ उनीहरू ह्याङ्ग आउट गर्न सक्छन्। तिनीहरू सबैमा एउटा कुरा साझा छ। तिनीहरू सबै मित्रविहीन छन्।
सिंहावलोकन - Haganai 3तु
यसले उनीहरूलाई आफ्ना नयाँ क्लबका साथीहरूसँग विश्वास गर्न केही दिन्छ। जे होस्, क्लबका सदस्यहरू बीच धेरै द्वन्द्व छ र तिनीहरू सबै सधैं त्यो राम्रोसँग प्राप्त गर्दैनन्। त्यसोभए त्यहाँ Haganai एनिमे सीजन2हुनेछ? त्यो हामी यस लेखमा छलफल गर्न जाँदैछौं।
हाम्रा मुख्य पात्रहरू सबै सुरुमा क्लबमा सामेल हुन्छन् र तिनीहरू सबै यसरी बन्छन्। तिनीहरू सबैमा एउटा कुरा समान छ जुन मैले माथि भने। धेरैजसो एपिसोडहरू हाम्रा पात्रहरू बहस गर्ने वा मूर्ख स्टन्टहरू र यात्राहरूमा जाने मात्र हुन्। हाम्रो मुख्य पात्र कोडाका हसेगावा धेरै सान्दर्भिक र सामान्य छ।
इटाची द्वारा लिखित र सचित्र बोकु वा टोमोडाची गा सुकुनै मa्गा श्रृंखला प्रकाशित गरिएको छ मिडिया कारखानामार्च २०१० मा मार्च २ issue, २०१० मा जारी भएको मासिक मासिक हास्य पत्रिका प्रकाशित भयो। थप रूपमा, श्रृंखला १ 2010 मा संकलन गरिएको छ। ट्यांबोन खण्डहरू। सात समुद्री मनोरंजन उत्तर अमेरिकामा पहिलो मa्गा श्रृंखला इजाजतपत्र दिइएको छ Haganai शीर्षक: अन्तर्गत म धेरै साथीहरू छैन।
मिसाकी हरुकावाद्वारा लेखिएको र शौची टागुची द्वारा चित्रित बोक्ू वा टोमोडाची गा सुकुनाई + (僕 は 友 達 達 少 な い +) एक रीडेमेड मa्गा श्रृंखला, मा प्रकाशित भयो जम्प SQ.19 डिसेम्बर २०१० देखि जुलाई २०१२ मुद्दाहरू सम्म। प्लसले अक्षरहरूलाई फरक अर्डरमा प्रस्तुत गर्दछ र बिभिन्न कारनामाहरूको माध्यमबाट जान्छ। श्रृंखला दुई खण्डहरूमा संकलन गरिएको थियो, जुन अक्टोबर 2010, २०११, र अगस्त 2012, २०१२ मा प्रकाशित भयो।
मुख्य कथा - Haganai 3तु
सेन्ट क्रोनिका एकेडेमीमा स्थानान्तरण गर्ने विद्यार्थी कोडाका हासेगावाले आफ्नो ब्राउन-गोरा कपालको मिश्रण (आफ्नो मृतक अ English्ग्रेजी आमाबाट वंशानुगत) र घोर देखिने आँखाले गर्दा साथी बनाउन गाह्रो भएको छ र उहाँलाई अपमानजनक जस्तो देखिन्छ। एक दिन, ऊ गल्तिले समान एकान्त र धेरै अपघर्षक योजोरा मिकाजुकी भेटिन्छ जब उनी "टोमो", उनको "हावा" (काल्पनिक) साथीसँग कुराकानी गर्छिन्। उनीहरूको सामाजिक जीवन र सीपको अभाव हो भन्ने बुझेर, उनीहरूले निर्णय गरे कि आफ्नो अवस्था सुधार गर्ने सब भन्दा उत्तम तरीका भनेको नेबरवर्स क्लब (隣人 R, Rinjin-bu) गठन गर्नु हो, “आफैं जस्तो साथीहरू नभएका मानिसका लागि स्कूल पछि क्लब”।
विभिन्न पृष्ठभूमि भएका अन्य विद्यार्थीहरू क्लबमा सामेल हुन्छन्: सेना काशीवाजाकी एक आकर्षक तर अहंकारी मूर्ति हो जसको कुनै महिला मित्र छैन र केटाहरूलाई उनको दासको रूपमा व्यवहार गर्दछ; युकिमुरा कुसुनोकी एक सशक्त अन्डरक्लासमान हुन् जसले कोडाकलाई मूर्ति बनाउँदछन् र उनी जस्तो मर्दानी बन्ने प्रयास गर्छन्; रिका शिगुमा विकृत दिमागको एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हुन्; कोबाटो हासेगावा कोडाकाको सानी बहिनी हुन् जसले साधारणतया भ्म्पायरको रूपमा काम गर्दछन्; र मारिया ताकायामा, दस बर्षे फाउल-मुउड नन जसले क्लबको सल्लाहकारको रूपमा सेवा गर्दछ। कथाले उनीहरूको यात्रालाई अनुसरण गर्दछ जब क्लबले बिभिन्न स्कूल र बाहिरका सामाजिक गतिविधिलाई साथी बनाउने अभ्यासको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
अर्को मौसम हुनेछ? - Haganai 3तु
Haganai को सिजन3हुनेछ कि भनेर बुझ्न हामीले4मुख्य कुराहरू हेर्न आवश्यक छ। एकचोटि हामीले4मुख्य कारणहरू पार गरिसकेपछि हामी संक्षेपमा भन्न सक्छौं कि यदि Haganai ले सिजन3पाउँछ र कहिले प्रसारण हुन्छ। मैले पहिले उल्लेख गरेका कारणहरू हुन्:
मौसम वा होग्नै (एआईसी बिल्ड) बनाउने उत्पादन कम्पनीले 3rdतु मौसमी कोष र उत्पादन गर्न सक्नेछ।
यदि मa्गा AIC बिल्डले राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सक्दछ किनकि यो पहिले छ जुन उनीहरूले २ अघिल्लो सीजनहरू उत्पादन गरेको हो।
मa्गा लेखिएको छ र यो अझै जारी छ त्यसैले यो विचार गर्नको लागि अर्को चीज हुनेछ।
यदि Haganai को तेस्रो मौसम लाभदायक हुनेछ वा छैन।
मंगा लेखिएको छ र लगभग 14 खण्डहरू मात्र अनुकूलित गरिएको छ। त्यसोभए त्यो २ सिजन हो। यसको मतलब यो हो कि मङ्गा अझै पनि लेखिएको छ भने अझै पनि सामग्री अनुकूलन गर्न बाँकी छ। थप रूपमा, श्रृंखला2ट्याङ्कबोन खण्डहरूमा सङ्कलन गरिएको छ। त्यसैले यो आशा छ कि त्यहाँ Haganai को अर्को सिजन 14 हुनेछ। हामीले कुर्नु र हेर्नु पर्छ। पहिलो एनिमे प्रसारण भएको ९ वर्ष भइसक्यो त्यसैले यो निकै लामो समय हो। जे होस्, एनिमे फुल मेटल प्यानिक जस्तै लामो अन्तरालमा गएको छ।
मौसम air वायु कहिले हुन्छ? - Haganai 3तु
हामीले छलफल गरेका सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भन्नु पर्ने हुन्छ कि एनिम अर्को3वर्षमा देखा पर्नेछ। आशा छ 2023 मा केहि समय। आशा छ, यो मामला हुनेछ। अहिलेको लागि, हामी यति मात्र भन्न सक्छौं। आशा छ, हामीले छिमेकी क्लब र यसका एक हिस्सा भएका सबै सदस्यहरूलाई फेरि भेट्न पाउनेछौं। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यो लेख उपयोगी पाउनुभयो। तलको समान लेख हेर्नुहोस्।
हामीले छलफल गरेका सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामी भन्न सक्छौं कि त्यहाँ Haganai सिजन3हुने सम्भावना छैन। यो त्यति आवश्यक छैन र यो त्यति लोकप्रिय पनि थिएन, म छक्क परेको छु कि यसले अर्को सिजन पनि पाएको छ। आशा छ, यो अन्तिम पटक फेरि फर्कनेछ र हामीलाई अर्को सिजन दिनेछ तर यो सम्भवतः हुने छैन।
टैग: haganaianime haganaianimesason3 haganaisson2 haganaiseason3releasedate सिजन ३ हगनाइ willtherebeaseson3ofhaganai
अघिल्लो प्रविष्टि जारा म्याकडरमोटले अर्ध नग्न तस्विर पोष्ट गरि आधा नग्न शरीर देखाउँदै
अर्को प्रविष्टि Kono Oto Tomare! - के एक मौसम P सम्भव छ?